Isaphulelo se-Amazon Prime Student (2020) - Prime Video, Music - Ezokuzijabulisa
Isaphulelo se-Amazon Prime student sizosiza abasebenzisi ukuthi bathole izinsizakalo ze-premium ngamanani aphansi. I-Amazon isitolo esikhulu kunazo zonke ku-intanethi. Bathathe umhlaba ngesiphepho ngezinsizakalo zabo.Isimo semvelo sinamandla amakhulu. I-Amazon ihlala ikhulisa izinketho abazinikeza amakhasimende abo. Ubulungu obuyinhloko buyadingeka kubantu abathanda ukuthenga ku-inthanethi. Isipiliyoni se-Amazon Prime ukukunikeza ukwaneliseka okwengeziwe. Abafundi badinga i-amazon ngezinsiza ezahlukahlukene, ezokuzijabulisa nezincwadi.
Uhlelo lokucabangela izitshudeni olucabangelayo lusiza ukuthi ujabulele isivivinyo samahhala sezinyanga eziyisithupha. Kukhona nezinye izici ezingeziwe futhi. Sizobhala yonke imininingwane mayelana nesaphulelo kulokhu kubhalwa. Funda ukuze wazi kabanzi.
Ungasithola kanjani isaphulelo se-Amazon Prime Student?
Inqubo yokubhalisela isaphulelo sabafundi iqonde ngqo. Noma ngubani obhaliswe ekolishi njengamanje angajabulela lesi saphulelo. Uzogcina usebenzisa imali encane kakhulu isikhathi eside. Isaphulelo sabafundi sizokusiza kakhulu ekunciphiseni izindleko zokuthenga. Kuyindlela enhle yokuba nomnotho owehlayo. Abafundi abaningi babhekene nezinkinga zokugcina izimali zabo. Isaphulelo sabafundi sizosiza ukwenza isimo sibe ngcono kancane. Nazi izinyathelo okudingeka uzilandele ukuze ubhalisele amadili kaNdunankulu.
Abasebenzisi badinga ukuqala iwebhusayithi ye-Amazon kwiziphequluli zabo zekhompyutha. Ungavakashela isayithi kusuka kukhompyutha ephathekayo, ideskithophu, noma iselula. Isebenza ngokumangalisayo kuwo wonke amapulatifomu.Abasebenzisi bangachofoza kusixhumanisi esilandelayo - https://amzn.to/2YrHxlA . Kuzokusa ekhasini elisemthethweni lokubhalisa labafundi baseNdunankulu.
Chofoza inkinobho yokuqala yesivivinyo ekhasini lasekhaya. Uzokuthola ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesayithi. Abafundi bangathola ukulethwa kwamahhala kwezinsuku ezimbili kuzo zonke izinto ezibalulekile zasekolishi. Isivivinyo samahhala sezinyanga eziyisithupha sikulethela ngosizo lwesivumelwano sokubambisana.
Lapho usuqale isilingo, uzodinga ukungena ngemvume kuwebhusayithi ye-Amazon. Faka ikheli le-imeyili nephasiwedi exhuma i-akhawunti yakho kungxenyekazi.
Abasebenzisi abangenayo i-akhawunti ye-Amazon badinga ukudala entsha. Kubalulekile ukubhalisa i-akhawunti ukuthola izinzuzo zesaphulelo sabafundi base-Amazon Prime. Udinga ukufaka imininingwane emincane enjenge-imeyili, inombolo yocingo, igama, bese wenza iphasiwedi. Lapho usuqinisekisile i-akhawunti yakho entsha, inqubo ingaqhubeka.
Udinga ukuqinisekisa ukuthi unemininingwane yaseyunivesithi etholakalayo nawe. I-Amazon idinga ukuqinisekisa ukuthi ufunda ekolishi. Bazoqoqa imininingwane yomuntu emincane. Inqubo yokuqinisekisa okuzenzakalelayo ivame ukuthatha imizuzu embalwa.
Ukwenza izinkokhelo eziku-inthanethi kubalulekile kubasebenzisi abafuna ukubhalisela isaphulelo. Uhlelo luzosebenza ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, kepha udinga ukunikeza imininingwane yokukhokha ngaphambili. Faka imininingwane yokukhokha ukuze uqale isilingo samahhala. Izosebenzela kahle abafundi ngokuhamba kwesikhathi.
Voila! Ubhalisele ngempumelelo isaphulelo sabafundi base-Amazon usebenzisa lezi zinyathelo. Manje usungajabulela zonke izinzuzo ze-premium eziza nensizakalo yazo. Sincoma wonke umfundi osemusha ukuthi azame lesi sivumelwano. Izinyanga eziyisithupha zezinsizakalo zamahhala ze-Amazon zingakusiza wonge imali eningi.
Mayelana ne-Amazon Prime Student Discount:
I-Amazon inkampani eyizigidigidi enesisekelo esikhulu sabasebenzisi. Abafundi kanye nabantu abadala abasebasha bakha ingxenye enkulu yamakhasimende abo aku-inthanethi. Isaphulelo se-Prime student siyindlela yokubuyisela kubathengi babo. Manje ungajabulela izinsizakalo zabo ze-premium mahhala ngale nsizakalo. Awudingi ukukhokha ngisho isenti elilodwa kuze kube yilapho icala lezinyanga eziyisithupha lingakapheli. Basebenzisane ne-Telecom giant Sprint ukwenza lokhu kube yiqiniso. I-Sprint ingumhlinzeki wesevisi ohamba phambili kuyo yonke i-USA. Ubhadane lwe-coronavirus lwenze izimo zaba yinselelo kuwo wonke umuntu. Sincoma ukuthi uzame isaphulelo somfundi ukuze uthole izinzuzo ezithile.
Ngubani ofanele ukuthola isaphulelo?
Isaphulelo sabafundi okwamanje sitholakala kuphela esifundeni sase-USA. Izinhlelo ezifanayo zisebenza emhlabeni wonke. I-Amazon yethule uhlelo lwentsha eNdiya, okuyindawo yayo yesibili ngobukhulu emakethe. Noma ngubani ongumfundi osebenzayo eyunivesithi ebhalisiwe yase-US angazuza izinzuzo. I-Amazon izokuqinisekisa ukubhaliswa kwakho futhi ikunikeze izinzuzo ngokushesha. Abasebenzisi badinga ukuba ne-akhawunti ye-imeyili yamachashazi futhi. Kuyimfuneko ebalulekile ngaphambi kokubhalisa.
Izinzuzo ze-Amazon Prime Student Discount:
I-Amazon ihlose ukunikeza abafundi izinzuzo ezinkulu phakathi nalesi simo sobhadane. Umnotho okhubazekile awulona usizo, kepha lesi sivumelwano sengeza ulwelwesi lwesiliva. Nazi ezinye izinzuzo zokusebenzisa izaphulelo zabafundi.
Izinsizakalo eziphambili ze-Amazon manje sezitholakala nge $ 6.49 kubafundi. Imvamisa, izindleko zitholakala cishe ku- $ 15 ngenyanga. Intengo incane kakhulu ngesaphulelo. Abafundi bathola nezinyanga eziyisithupha mahhala kulokhu kubhalisa. Kungokunye kwamadili angcono kakhulu ongawathola ku-inthanethi. Sekukonke uzokonga amathani emali ekuthengeni online.
Ukulethwa Okusheshayo Nokukhululekile:
Akekho othanda ukukhokha imali eyengeziwe ngokuthunyelwa. I-Amazon izama ukuqinisekisa ukuthi ungonga imali ethe xaxa. Isivivinyo samahhala sizokusiza ukuthi ulondoloze amathani wezindleko zokulethwa. Manje ungathola zonke izimpahla zakho zilethwe ngale nkundla. Sincoma ukuthi uzame amasevisi wokulethwa okusheshayo kokubalulekile. Baziwa ngokunaka okwengeziwe izibonelelo zabafundi.
Prime Music at Isaphulelo:
I-Amazon prime music iyilabhulali enkulu yezingoma ezinhle. Abasebenzisi besaphulelo sabafundi bangathola okubhaliselwe okungaphansi kokungu- $ 1 ngenyanga.Kuyisivumelwano esimnandi kuwo wonke amakhanda we-bass ekhampasi. Jabulela umculo wekhwalithi ephezulu nge-Amazon ngohlelo lwakho oluhlanganisiwe.
Amadili akhethekile abafundi:
Uthola isaziso sokuqala kumadili wakamuva ku-elekthronikhi, izincwadi, ukudla okulula, izembatho, ukunakekelwa kwezempilo, nezinye izinsiza.
Indlela yokuphila yabafundi idinga ukuthi utshale imali kwimikhiqizo eminingi. Lezi zipesheli zabafundi zingeza kakhulu kumxube.
Abafundi bathola nokuzijabulisa kwe-premium endaweni yesikhulumi.Ungajabulela izinsizakalo ze-Prime Video nezokufunda okuphambili ngalokhu okubhalisile. I-Prime Video inelabhulali enkulu yokuqukethwe kwekhwalithi. Umbukiso owaziwa kakhulu emsamo nguTom Clancy, uJack Ryan. U-Prime reukukhangisa kukunika ukufinyelela ezincwadini eziningi mahhala ngokuphelele.
Lezi zonke izici ezinhle ongaba nazo ngokuvumelana okukodwa okubandakanya konke. Uthola lezi zinsizakalo mahhala phakathi nezinyanga eziyisithupha zokuqala.
Isaphulelo se-Amazon prime student isinyathelo esihle kakhulu ngebhizinisi eliku-inthanethi. Kulo mhlahlandlela, besithemba ukusula konke ukungabaza kwakho maqondana nokubhaliselwe. Jabulela ukuthenga ku-inthanethi ngamanani aphansi.